Sendikalisita mitafy maillot mpanao politika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Sendikalisita mitafy maillot mpanao politika
Raikitra ny sakoroka. Voasambotra indray ny sendikalisita iray. Nampidirina am-ponja vonjimaika ilay mpitondra tenin’ny mpiasan’ny Air Mad. Voa izay…
Tampoka mbola tsy nifarana akory ny fanamarihana ny fetin’ny 26 jiona dia injany fa re ny vaovao fa nampanantsoina tao amin’ny polisin’ny toekarena ao Antananarivo i Rado Rabarilala sy ny namana enina hafa mpiara-mitarika ny girevin’ireo mpiasan’i Air Mad.
Na dia natao aza ny tsy ho taitra dia taitra ihany ny tena nandre izany. Tsy taitra ny tena satria olan-dry zalahy mpanan-karena no niheverana izany girevin’ny kaompania fitaterana ana habakabaka izany. Taitra ny tena nandre izany satria vao ny 26 jiona anie ny Filoham-pirenena no niventy ny fihavanana kinanjo ny 27 jiona izany hoe ny ampitso dia indro fa niasa ny sekiretera jeneralin’ny Ministeran’ny fitaterana. Niasa nanao sonia ny fitoriana an’ireo mpiasan’i Air Mad mpitarika girevy ireo. Tahaka ny tsy nisy izany ny kabary tsara lahatra teny Iavoloha. Ilay kabary tokana. Marihina tsara fa ny asabotsy ampitson’ny fankalazana ny 26 jiona fetin’ny fahaleovantena no napetraka ny fitoriana.
Tonga koa dia namaly ampahatsorana ny fiantsoana azy i Rado Rabarilala. Ary tonga dia voatazona tany. Mandrak’ity ny andro nanoratana an’izao Tafatafan’i Talata izao re olona dia mbola any izy. Ny talata 30 jiona no nanoratana izao lahatsoratra izao.
Nambara fa hiakatra fampanaovana ny alatsinainy 29 jiona izy. Nanao be midina ny mpiasan’i Air Mad niandry teny amin’ny fitsarana teny Anosy. Nanampy tosika ireo sendikalisita hafa. Vory lanona ny mpitolona. Tazana teny koa ireo mpitolona politika sasany. Mpanararaotra. Saingy… Niandry vasoka ihany satria… Nanana ny paikadiny koa ireo eo anivon’ny fitsarana. Mbola nitohy ny fanadihadiana teo anivon’ny polisy ekonomika. Nanao sava hao (perquisition) ny trano fonenan’i RAdo Rabarilala ny polisy. Tsy maintsy manatrika izany ny tompon-trano. Izay no lalàna manan-kery. Dia niandry vasoka teo anosy indray aloha izany ny mpitolona sendikalisita matihanina sy ireo namany. Maty andro. Tsy olana ho anay izany hoy ny iray satria afaka mifanentana teto izahay, mahita izao ny mpiasa fa tena ilaina anie ny sendika e.
Tena ilaina ny sendika ? Tena ilaina ny sendika saingy… samy mandeha samy mitady izy ireo. Vokatry ny fifanabeazana nisy tamin’ny Repoblika faharoa izany. Vokatry ny fampiharana ny zarazarao hanjakana no mahatonga izany samy mandeha, samy mitady izany. Izao lasa misy sendika samy hafa isaky ny orinasa, sendika samy hafa isaky ny Minisitera ary na ao anaty Minisitera iray aza dia mety samy hafa ny sendika mijoro isaky ny direction. Moa tsy izany va no tazana tao amin’ny direction du Trésor raha nitolona izy ireo raha nisy ny fanesorana ny lehiben’izy ireo ? Dia nitolona ary nitazam-potsiny ireo mpiasa hafa. Dia izao no vokany… Mitoloma aloha ianareo ry mpiasan’i Air Mad fa raha mandeha io dia mijapy izahay… dia izany tokoa no hita. Mijapy ireo sendika hafa. Etsy ankilany anefa ny mpitondra fanjakana dia manao ny ataony. Mora ho azy ny nampiakatra ny saran-dalana fa fantany fa hifantoka amin’ny fiarovana ny mpitolona iray ny sendikalisita fa tsy hijery ny tombontsoan’ny daholobe vahoaka mampiasa ny fitateram-bahoaka koa dia nakarin’ny mpitondra ny vidin’ny solika. Hilaza ny mpitondra fa tsy tompon’antoka amin’izany izy satria malalaka ny fandraharahana. Kanefa dia hita izao fa nahazo tsodrano tamin’ny Fanjakana matoa ny ampitson’ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa no nampiakatra ny vidin’ny solika isaky ny litatra ny mpandraharaha. Dia iza no sendika niaro ny mpanjifa ? Sa tsisy an’izany fa fikambanana no nisy ? Marihina fa tazana teny amin’ny tribonaly ireo milaza ho mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Mifangaro ny tolona eto. Mpiaro ny zon’olombelona no nandrasana ka mpiaro ny zon’ny mpanjifa no nisolo vaika ny ankalana.
Dia sahirana ny tena manoloana izany. Voalaza fa tsy nandoa ny latsakemboka any amin’ny Cnaps hono ny Air Mad. Mba fantatra ihany leiretsy fa masiaka io Cnaps io. Niarahana nahita ny nanaovany an’ireny sekoly madinika kely ireny. Notoriny tany amin’ny fitsarana izay tsy nampiditra ny mpampianatra ho mpikambana tany aminy. Voatery nanao lavanty ny fananany ny sekoly tsy miankina sasany. Zava-nisy izany. Ka nahoana no tsy nahita ity sampan-draharaha afaka mahita ny trosan’ny madinika no tsy nahatazana ny volabe tsy tafiditra ? Mahavariana sa izao ilay mifampiaro amin’ny ratsy ny samy ngeza ?
Sendikalisita no tena ventin-dresaka. Raha mbola misaratsaraka sy finaritra manao ny maillot an’ireo mpilalao politika ianareo ry sendikalisita dia ho rambony sy ho gisitra hatrany ny tombontsoan’ny mpiasa. Mba tena marina moa izany…
Point de vue : L'autre vainqueur de la Coupe du monde: le "grit" - il y a 8 mois
Deuil : Exemples de deuil national - il y a 2 années